Zavatra ilaina 11 hankafizana an'i Granada | Vaovao momba ny dia
Zavatra ilaina 11 hahafinaritra an'i Granada
Susana Garcia | | Granada, Inona no ho hita
Granada dia iray amin'ireo toeran-kaleha izay mahatonga anao hitia na dia mbola tsy fantatsika aza izany, mieritreritra fotsiny ny tenanao mandeha mamaky ny arabe manan-tantara izy, na mandehandeha mamaky ny Alhambra mahafinaritra, dia efa maniry ny handeha hitady tapakila hankany amin'ity tanàna mahafinaritra ity izahay. Androany dia holazainay aminao ny zavatra ilaina 11 mankafy an'i Granada sy ny manodidina.
Tsy vitan'ny hoe afaka mankafy fitsidihana mahafinaritra any an-tanànan'i Granada manan-tantara ianao, fa hahita ihany koa toerana mahaliana maro ao amin'ny faritany mba hanakaiky kokoa rehefa vakansy ao amin'ilay tanàna tsara tarehy isika. Ny hetsika toy ny ski sy ny fandehanana eny amoron-dranomasina dia azo atao any Granada, ankoatry ny fitsidihana ara-tantara sy ny fahafinaretan'ny tanàna feno fiainana sy kolontsaina.
1 Tsidiho ny Alhambra sy ny Generalife
2 Jereo ny Science Park
3 Ankafizo ny fomba fijery avy amin'ny Mirador de San Nicolás
4 Ski any Sierra Nevada
5 Mandro amin'ny Costa Tropical
6 Tsidiho ny lapan'i Carlos V
7 Mandehandeha mamaky ny faritra Albaicín
8 Tsidiho ny Sacromonte
9 Jereo ny fandroana Arabo ao Bañuelo
10 Jereo ny filentehan'ny masoandro any amin'ny Torre del Homenaje
11 Mandro amin'ny hammam Arabo mahavariana
Tsidiho ny Alhambra sy ny Generalife
Izany no iray amin'ireo tsangambato be mpitsidika indrindra eto amin'izao tontolo izao ary ny tena ilaina ao an-tanànan'i Granada. Tsangambato maneho ny herin'ny tarana-mpanjaka Nasrid ary namela lova lehibe ho antsika, ary ankehitriny dia vakoka manerantany. Amin'ity tsangambato ity dia mila maka mora foana ianao, satria maro ny zavatra azo tsidihina. Ny tokotany malaza miaraka amin'ny Loharanon'ny Liona, ny tranon'ny Nasrid na ny Generalife. Haharitra ora maromaro ny fitsidihana, noho izany dia tsy maintsy miala maraina iray na iray tolak'andro isika ary mampahafantatra ny momba ny fivarotana tapakila hividianana azy ireo mialoha kokoa, satria misy filaharana lehibe miforona.
Jereo ny Science Park
Ity fitsidihana ity dia mety raha handeha hiaraka amin'ny ankizy ary hitazomana tsara ny fitsidihan'izy ireo, ankoatr'izay mahafinaritra, tena doaktika izany. Afaka mianatra ny fitsipiky ny Archimedes isika, mampiasa kaleidoscope goavambe, mianatra momba ny ADN, ary miaina zavatra maro mifandraika amin'ny siansa. Misy ihany koa ny planetarium mety hahaliana ny olona rehetra.
Ankafizo ny fomba fijery avy amin'ny Mirador de San Nicolás
Ity dia fomba fijery izay tokony halehantsika raha te hanana isika sary mety tsara amin'ny tanànan'i Granada. Ny fahitana ny Alhambra miaraka amin'ireo tampon-tampona misy lanezy any aoriana dia fahitana tsy tokony ho hita. Mihanika azy io avy eo amin'ny manodidina an'i Albaicín, izay fitsidihana hafa tsy maintsy lalovantsika, ka raha tianay ny fahitana panoramic sy ny endrika mahafinaritra, dia toerana iray izay tianay izany.
Ski any Sierra Nevada
Miala lavitra ny tanàna izahay ary mankafy fialamboly hafa any Granada. Amin'ity faritany ity dia ny Faritra Sierra Nevada, miaraka amin'ny toeram-pilalaovana ski ho an'ireo tia fanatanjahan-tena amin'ny lanezy. Tsy misy isalasalana fa fiovana lehibe izany, raha miala amin'ny toetr'andro mafana any Granada mankany amin'ny hatsiakan'ny tampon'ny tampony, fa azo antoka ny fialamboly.
Mandro amin'ny Costa Tropical
Raha midina hatrany isika dia hahita ny morontsirak'i Costa Tropical. Aorian'ny rivotra madio any an-tendrombohitra dia miverina amin'ny hafanana amin'ity morontsiraka ity isika feno tanàna mahafinaritra sy morontsiraka tsara tarehy handro. Almuñécar na Motril dia sasany amin'ireo toerana itadiavana lalana hamakivakiana ity morontsiraka ity.
Tsidiho ny lapan'i Carlos V
Ity tranobe manana endrika Renaissance ity dia lavitra ny fananganana Arabo izay antenaintsika rehetra ho hita ao Granada, ka noho izany dia mendrika fiatoana izy Fa io trano io koa no foibe ankehitriny ny Museum of Arts tsara avy amin'ny tanàna, ka azo antoka ny fitsidihana ara-kolontsaina.
Mandehandeha mamaky ny faritra Albaicín
Ilaina ny very any amin'ny faritra Albaicín, fitaomana lehibe silamo, misy arabe kely eo anelanelan'ny trano fotsy, fivarotana dite ahafahanao mankafy ny tsiro sy ny fivarotana arabo ahafahanao mijanona mividy antsipiriany tsara tarehy. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo toerana marika sy kanto indrindra eto an-tanàna.
Tsidiho ny Sacromonte
Ity faritra ity no ahafahantsika mankafy toerana tena izy, miaraka amin'ireo trano tsara tarehy misy lavarangana. Amin'ity faritra ity dia mila mankafy zambra ianao dihy flamenco mahazatra.
Jereo ny fandroana Arabo ao Bañuelo
ireo Ny fandroana arabo no tranainy indrindra avy ao an-tanàna ary tena tsara ny toe-pahasalamany, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny zava-misy dia miorina amin'ny rihana ambanin'ny trano tsy miankina izy ireo, satria natsangana teo ambonin'izy ireo taonjato maro lasa izay, niaraka tamin'ny asa kristianina. Voaro izy ireo ankehitriny ary iray amin'ireo trano tranainy indrindra ao Granada, noho izany dia tsy maintsy hiseho izy ireo tsy amin'ahiahy.
Jereo ny filentehan'ny masoandro any amin'ny Torre del Homenaje
Ny Torre del Homenaje de la Alhambra dia iray amin'ny toerana tsara indrindra Ankafizo ny filentehan'ny masoandro ao an-tanànan'i Granada. Tsy misy isalasalana fa tsy afaka tsy mahita an'io fahitana io isika, miaraka amin'ny fahitana ny tanàna sy ny filentehan'ny masoandro.
Mandro amin'ny hammam Arabo mahavariana
Ny fandroana Ar-Andalus Arabo dia natsangana teo ambonin'ny rava hammam taloha, Ka ho eo alohan'ny fandroana arabo tena izy isika izay miasa ankehitriny, ary mahatalanjona ny fahitany azy. Toerana iray mampiala aina antsika ny fahitana ny efitrano fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Zavatra ilaina 11 hahafinaritra an'i Granada
Tsidiho ny Tunnels Cu Chi, any Vietnam